नेकपाका सांसद को कतातिर? प्रतिनिधिसभामा प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा ८७, ओली पक्षमा ८३ (सूचीसहित) :: Setopati
नेकपाका सांसद को कतातिर? प्रतिनिधिसभामा प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा ८७, ओली पक्षमा ८३ (सूचीसहित) अंकगणितको खेलमा वामदेव गौतम निर्णायक?
सन्जिब बगाले काठमाडौं, फागुन १८
संसद अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेकपाभित्र सांसदहरूको तानातान तीव्र भएको छ। अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'- माधव नेपालपक्ष बीच सदस्य संख्याका हिसाबले कडा टक्कर छ।
दुवै समूहबीच सांसद संख्याको फरक यति साँघुरिएको छ, वामदेव गौतम निर्णायक हुने स्थिति बन्न लागेको छ। उनले भने आफू एकताको पक्षधर भएको भन्दै कतै पनि नलागेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा नेकपाका एक सय ७४ जना सांसदमध्ये एक जनाको निधन भएको छ भने सभामुख अग्नि सापकोटा दलका सदस्य हुँदैनन्। त्यसैले अहिले एक सय ७२ सांसद कायम छन्। त्यसमध्ये प्रचण्ड-नेपाल समूहले आफूसँग ९० भन्दा बढी सांसद भएको दावी गरेको छ भने ओली समूहले ८८ सांसद आफूसँग रहेका दावी गरेको छ।
अहिलेसम्म वामदेव गौतम, उनकी पत्नी तथा सांसद तुलसी थापा र लालबाबु पण्डित कुनै पनि समूहमा लागेका छैनन्। अरू लगभग एउटा समूहतिर खुलेका छन्।
सेतोपाटीले अहिलेसम्म खुलेका सांसदहरूको तथ्यांक केलाउँदा प्रचण्ड-नेपाल पक्षसँग ८७ र ओली समूहसँग ८३ सांसद छन् (यो समाचारको अन्तिममा सूची हेर्नुस्)। आफूहरूसँग धेरै सांसद रहे पनि प्रचण्ड-नेपाल समूह ढुक्क हुन सकेको छैन।
'हामीसँग सांसद संख्या अलिकति भए पनि धेरै छ। तर अन्तिम समयमा केही संख्या यताउता हुने हो कि भन्ने डर पनि छ। किनकी ओलीसँग पैसा र शक्ति छ,' प्रचण्ड-नेपाल समूहका एक सांसदले भने, 'नेकपाको संसदीय लडाइँमा फेरि पनि वामदेव गौतम नै निर्णायक हुने स्थिति छ।'
वामदेव, तुलसी र लालबाबु तीन जना खुल्न बाँकी भए पनि उनीहरू कुनै एक समूहतिर लाग्दा अरू केही सांसद पनि प्रभावित हुन सक्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहका सांसदले बताए।
'उनीहरूसहित पाँच-सात जना सांसदको संख्या एकतिर थपघट हुन सक्छ,' उनले भने।
नेकपा विभाजन गर्नु हुँदैन भनेर लागेका सांसद लालबाबु पण्डित अन्तिम समयमा आफूतिर आउनसक्ने प्रचण्ड-नेपाल पक्षको आशा छ। उनले भने मंगलबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै आफू ओली, प्रचण्ड र नेपाल एक ठाउँमा उभिए भने मात्र त्यस्तो बैठकमा सहभागी हुने नत्र कतैतिर नलाग्ने बताए।
केही गरी अन्तिम समयमा वामदेव, तुलसी र लालबाबु ओलीतिर लागे भने ओलीले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने डर पनि प्रचण्ड-नेपाललाई छ।
उनीहरू तीन जना ओलीतिर लागे भने प्रतिनिधिसभामा ओली पक्षसँग ८५ सांसद पुग्छन्। वामदेव राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् भने तुलसी र लालबाबु प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड-नेपालसँग प्रतिनिधिसभामा ओली समूहभन्दा दुई जना मात्रै सांसद धेरै हुन्छन्।
नेकपा संसदीय दलको विधानमा राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले समेत संसदीय दलको नेता चयनमा मतदान गर्न पाउँछन्। उपाध्यक्ष वामदेव ओली समूहमा लागे भने राष्ट्रियसभामा ओलीकै बहुमत पुग्छ। राष्ट्रियसभामा नेकपाका ५० जना सांसद छन्। राष्ट्रियसभा अध्यक्षले मतदान गर्न नपाउने भएकाले ४९ जना कायम हुन्छ। ४९ जनामध्ये प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा २४ सांसद छन् भने ओली समूहमा पनि २४ जनै छन्। यस्तो अवस्थामा गौतम जता लाग्छन्, राष्ट्रियसभामा उसकै बहुमत पुग्छ।
वामदेव गौतमको सकस
अन्तिम अवस्थामा कतातिर लाग्ने भन्नेमा वामदेवको सकस पनि कम छैन। त्यही सकसले गर्दा उनले अहिले निर्णय लिन नसकेको उनीनिकट स्रोतको दावी छ। वामदेवकी श्रीमती तुलसी थापा ओली समूहले विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन्। यद्यपि उनले केन्द्रीय कमिटीको सपथ लिएकी छैनन्। त्यस्तै छोरा हरिश गौतम ओली समूहका बर्दिया जिल्ला कमिटी सदस्य हुन्। हरिशले भने सपथ लिइसकेका छन्।
वामदेवका स्वकीय सचिव दीपक टमाटा प्रचण्ड-नेपाल समूहका बर्दिया जिल्ला सदस्य हुन्। वामदेवका प्रेस सहयोगी विश्वमणि सुवेदी प्रचण्ड-नेपाल समूहको प्रेस संगठनका सह-संयोजक छन्। पछिल्ला समयमा वामदेवसँग सबभन्दा नजिक रहेका बलराम बास्कोटा र सावित्रा भुषाल प्रचण्ड-नेपाल समूहमा छन्। वामदेवनिकट मानिने केन्द्रीय सदस्य ताज महमद मिया केही दिनअघि मात्रै प्रचण्ड-नेपाल समूहमा आवद्ध भएका छन्।
वामदेवसँगै कुनै समूहमा नलागेका हरि पराजुली मात्रै छन्। त्यस्तै उनीसँग निकट रहेका सांसद गणेश ठगुन्ना ओली सरकारका मन्त्री छन्। सांसदहरू लालबहादुर थापा, भैरवबहादुर सिंह, भुपेन्द्र थापा लगायत ओली समूहमा छन्।
ओली समूहमा लागेर अपमान मात्रै सहनुपर्ने गुनासो उनले आफूनिकटसँग गरेका छन्। कता लाग्ने भन्ने टुंगो छैन। आफूले एकता अभियानै चलाउने उनले निकटहरूलाई बताउँदै आएका छन्।
'उहाँले सकेसम्म एकता अभियान नै चलाउनुहुन्छ। यदि खुल्नै पर्ने अवस्था आयो भने पनि ओलीतिर लाग्ने सम्भावना देखिँदैन,' वामदेवनिकट स्रोतले भन्यो, 'विचार, दृष्टिकोण र एजेण्डाका हिसाबले प्रचण्ड-नेपालसँगै नजिक हुनुहुन्छ। तर यसै गर्नुहुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन।'
नेकपाभित्र जारी राजनीतिक टकरावमा संसदीय दलको बहुमत कतातिर छ भन्ने कुराले खासै अर्थ नराख्ने देखिँदैछ। संसद सुरू हुने बेलासम्मा ओलीले राजीनामा दिएनन् भने वा अर्को पार्टी खोलेनन् भने प्रचण्ड-नेपाल पक्षको तयारी उनलाई संसदीय दलमा चुनौती दिने छैन। उनीहरू संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लगेर नेपाली कांग्रेस र समाजवादी जनता पार्टीको सहयोगमा उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनेमा छन्।
प्रचण्ड-नेपाल निकट सांसद रामनारायण विडारीले सेतोपाटीसँग भने, 'संसद पुनर्स्थापना भइसकेको अवस्थामा हामी प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् नै हटाएर देखाउनेछौं।'
त्यो अवस्थामा उनीहरूसँग प्रतिनिधिसभाका ८० सांसद भए पनि नेपाली कांग्रेससँग मात्र मिल्दा पनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनेछ। तर संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत हुनु नेकपाका दुवै पक्षका लागि नैतिक हिसाबले ठूलो महत्व राख्छ। त्यसैले दुवै पक्ष सांसद तानातानमा जोड गरिरहेका छन्।
ओली पक्षले फागुन २२ गते संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। त्यहाँ उसका पक्षमा बहुमत पुग्यो भने त्यो ओलीको ठूलो नैतिक जित हुनेछ।
नेकपाका सांसद को कतातिर ?
प्रतिनिधि सभामा नेकपा सांसद राष्ट्रिय सभामा नेकपा सांसद
सभामुख, अग्नि सापकोटा १ अध्यक्ष, गणेश तिमल्सिना १
अहिले कायम रहेका १७२ (सानु सिवाको मृत्यु ) अहिले कायम रहेका ४९
जम्मा नेकपा सांसद १७४ जम्मा सांसद ५०
प्रचण्ड-नेपाल समूह केपी ओली समूह
प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा
१ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नाराणकाजी श्रेष्ठ केपी शर्मा ओली सुमित्रा विक
२ माधवकुमार नेपाल वेदुराम भुसाल विष्णु पौडेल भगवती न्यौपाने
३ झलनाथ खनाल दिनानाथ शर्मा सुवासचन्द्र नेम्वाङ दिलकुमारी रावल थापा
४ कृष्णबहादुर महरा पर्शुराम मेघी गुरूङ ईश्वर पोखरेल चन्द्रबहादुर थापा
५ देवप्रसाद गुरुङ गंगाकुमारी बेलबासे नवराज सिलवाल कविता बोगटी
६ देवेन्द्र पौडेल गोपीबहादुर अछामी गोकुल बास्कोटा इन्दु कडरिया
७ सुरेन्द्रकुमार कार्की जगप्रसाद शर्मा कृष्णप्रसाद दाहाल ईन्दिरा देवी गौतम
८ गिरिराजमणी पोखरेल तारामान स्वार पोल्देन छोपाङ गुरुङ अगम प्रसाद वान्तवा राई
९ चाँदतारा कुमारी माया प्रसाद शर्मा नारायणप्रसाद मरासिनी रामचन्द्र राई
१० सिता पोखरेल खिम कुमार बिक पद्माकुमारी अर्याल रामलखन चमार
११ सुरेश चन्द्र दाश जीवन कुमार बुढा तिलकबहादुर महत नैनकला ओझा
१२ बोधमाया यादव ठगेन्द्र प्रसाद पुरी प्रेमप्रसाद तुलाचन नरपति लुवार
१३ मातृकाप्रसाद यादव नन्दा शर्मा चपाई खगराज अधिकारी दिपा गुरुङ
१४ वर्षमान पुन महेश कुमार महरा विद्या भट्टराई तुलसा कुमारी दाहाल
१५ घनश्याम भुसाल राधेश्याम पासवान जगतबहादुर सुनार गोपाल भट्टराई
१६ योगेश भट्टराई शेरबहादुर कुँवर केदार सिग्देल चक्रप्रसाद स्नेही
१७ रामेश्वर राय यादव हरिराम चौधरी वसन्तकुमार नेम्वाङ कोमल वली
१८ शक्तिबहादुर बस्नेत उदया शर्मा पौडेल लालप्रसाद सावा (एलपी) सुमन राज प्याकुरेल
१९ धर्मशिला चापागाई रामनारयण बिडारी राजेन्द्र गौतम विमला घिमिरे
२० इन्दुकुमारी शर्मा बिना पोखरेल राजेन्द्र राई भैरव सुन्दर श्रेष्ठ
२१ हरिबोल गजुरेल शान्तीकुमारी अधिकारी जिसी घनश्याम खतिवडा देवेन्द्र दाहाल
२२ हितबहादुर तामाङ शारदा देवी भट्ट आशाकुमारी विक खिमलाल भट्टराई
२३ पम्फा भुसाल सिंहबहादुर बिश्वकर्मा जुलीकुमारी महतो रामबहादुर थापा
२४ शसी श्रेष्ठ शशिकला दाहाल रेखा कुमारी
२५ श्यामकुमार श्रेष्ठ गौरीशंकर चौधरी
२६ अन्जना बिशंखे शेरबहादुर तामाङ
२७ गंगाबहादुर तामाङ प्रेमबहादुर आले
२८ यशोदा सुवेदी गुरुङ नारदमुनी राना
२९ हरिराज अधिकारी गणेशसिंह ठगुन्ना
३० अमृता थापा दामोदर भण्डारी
३१ चुडामणि खड्का नरबहादुर धामी
३२ दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा यज्ञ बोगटी
३३ कमला रोक्का रामवीर मानन्धर
३४ टेकबहादुर बस्नेत धनबहादुर बुढा
३५ सत्या पहाडी भानुभक्त ढकाल
३६ बिना मगर विशाल भट्टराई
३७ राजबहादुर बुढा क्षेत्री लिलानाथ श्रेष्ठ
३८ पार्वती कुमारी विशुन्खे रघुविर महासेठ
३९ दुर्गाबहादुर रावत पार्वत गुरुङ
४० ध्रुबकुमार शाही भूमिप्रसाद त्रिपाठी
४१ जनार्दन शर्मा टोपबहादुर रायमाझी
४२ जयपुरी घर्ती लेखराज भट्ट
४३ रेखा शर्मा प्रभु साह
४४ पूर्णकुमारी सुवेदी खेमप्रसाद लोहनी
४५ ओनसरी घर्ती कृष्णबहादुर राई
४६ शन्तकुमार थारु कृष्णकुमार श्रेष्ठ(किसान)
४७ महेश्वर गहतराज कृष्णगोपाल श्रेष्ठ
४८ गजेन्द्रबहादुर महत महेश बस्नेत
४९ चक्रपाणी खनाल भुपेन्द्र बहादुर थापा
५० जिवनराम श्रेष्ठ सूर्यप्रसाद पाठक
५१ गणेशकुमार पहाडी पदम गिरी
५२ सरला यादव प्रदिप ज्ञवाली
५३ पुष्पकुमारी कर्ण छविलाल विश्वकर्मा
५४ कृष्णलाल महर्जन दलबहादुर राना
५५ नारायणप्रसाद खतिवडा वृजेशकुमार गुप्ता
५६ कृष्णभक्त पोखरेल नन्दलाल रोका क्षेत्री
५७ मायादेवी न्यौपाने हृदयश त्रिपाठी
५८ विरोध खतिवडा रवीन्द्रराज शर्मा
५९ रामकुमारी झाक्री नवराज राउत
६० कल्याणीकुमारी खड्का लालबहादुर थापा
६१ यज्ञराज सुनुवार भैरबहादुर सिंह
६२ समिना हुसेन विजय शुब्बा
६३ जयकुमार राई मोहन बानियाँ
६४ मेटमणी चौधरी मोतिलाल दुगड
६५ हिराचन्द्र केसी थममाया थापा
६६ लक्ष्मीकुमारी चौधरी शिवमाया तुम्बाहाङफे
६७ भवानीप्रसाद खापुङ सुजिता शाक्य
६८ झपट रावल बिना श्रेष्ठ
६९ निरा देवी जैरु नविना लामा
७० दिपकप्रकाश भट्ट शान्तिमाया पाख्रिन
७१ कलिला खातुन राधाकुमारी ज्ञवाली
७२ सोमप्रसाद पाण्डेय कुमारी मेचे
७३ बिनादेबी बुढाथोकी बिन्दा पाण्डे
७४ भीम रावल गोमा देवकोटा
७५ मुकुन्द न्यौपाने निरुदेवी पाल
७६ पवित्रा निरौला मनकुमारी जिसी
७७ गंगा चौधरी सतगौवा विष्णु शर्मा
७८ गोकर्ण विष्ट सरिता न्यौपाने
७९ सुरेन्द्र पाण्डे मैनाकुमारी भण्डारी
८० गोपाल बम तिर्था गौतम
८१ शिवकुमार मण्डल शान्ता चौधरी
८२ हेमकुमार राई विमला विश्वकर्मा
८३ रामकुमारी चौधरी सरिता कुमारी गिरी
८४ अमनलाल मोदी खुल्न बाँकी
८५ सुरेशकुमार राई प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा
८६ सुदन किराती तुलसी थापा वामदेव गौतम
८७ दिलकुमारी लालबाबु पण्डित
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १९, २०७७, ०३:०१:००